नवराजको प्रेमिकाको पे'टमा ब'च्चा छ भनेर कस्ले ह'ल्ला फि'जायो ? बा'स्तवि'कता के हो - Filmy News Portal Of Nepal
‘नवराजको प्रेमिकाको पे’टमा ब’च्चा छ भनेर कस्ले ह’ल्ला फि’जायो ? बा’स्तवि’कता के हो’
आफुलाई सामाजिक अभियन्ता बताउने सविता भट्टराईले रुकुम जाजरकोट घ”टनालाई जातिय वि’भेदका कारण भएको घ’टना भएको बताएकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा चर्चीत भएका घ’ट’नाहरुमा आफ्नो धारणा राख्दै आउने सविताले रुकुमको घ’टनामा पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले यो घट’नालाई पनि जातिय वि’भेदकै हो भन्ने बताएकी छन् ।
उनले युवती नवराज विकको घरमा पटक पटक गएर बसेको, नव’राजको परिवारले वुहारीको रुपमा स्वीकारी सकेको पनि देखिएको बताएकी छन् । नवराजको आमाले युवतीको पेट’मा बच्चा छ भनेर दा’वी गरेको विषयमा पनि उनले छा’नवि’न गर्नुपर्ने बताएकी छन् । उनले बारम्बार केटी नवराजको घरमा गएर बस्ने भएकाले नवराजको आमाले भनेको कुरामा सत्यता हुनसक्ने बताएकी छन् । नवराजकै आमाले त्यो कुरा भनेका कारण यो कुरालाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
उनले यो घ’टनामा केटी पक्षका ब्यक्तिले ह त्या गरेर फा’लेको दावी गरेकी छन् । शनिवार भएको घ’टनामा नवराज सहित ५ जनाको निधन भइसकेको छ भने एक जना अझै फेला परेका छैनन् । उनले युवतीको आमाले जा’तिय शब्द प्रयोग गरेका कारण यो जा’तियताका कारण नै भएको घट’ना हो भनेर दा’वी गर्न सकिने बताएकी छन् । उनले अझ वडाध्यक्षको पनि संलग्नता देखिएका कारण यो घट’नामा नि’ष्पक्ष छा’नवि’न गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
उनले अहिलेको जमानामा पनि जाति’यताका नाममा भएको यो घ’टनाले देशकै देश निहुरिएको बताइन् । प्रेममा बलिदान दिएर नि’धन भएका कारण उनीहरुलाई परिवारका सदस्यले माग गरे जस्तो शहिद घोषणा गर्न नमिल्ने बताइन् । उनले प्रेम कहानीका रुपमा यो विषय चर्चीत हुनसक्ने भएपनि सहिद भन्न नमिल्ने बताएकी छन् ।